Cesc Fabregas oo shaaca ka qaaday in Neymar Jr uu la heer yahay Ronaldinho – Gool FM
(Paris) 06 Maajo 2020. Cesc Fabregas oo hadda ka ciyaara Faransiiska ayaa shaaca ka qaaday in saaxiibkiisii hore ee Barcelona Neymar Jr uu u qalmo in loo aqoonsado si la mid ah halyeeygii kooxda ee Ronaldinho.
Xiddigan garabka ka ciyaara ayaa Barcelona waqti qurux badan ku qaatay intii lagu jiray afartii sano ee uu joogay garoonka Camp Nou, isagoo dhaliyay 105 gool 186 kulan oo uu saftay, isagoo kooxda ka caawiyay inay ku guuleysato siddeed koob oo uu ku jiro Champions League sanadkii 2015-kii.
Neymar ayaa ka tagay Barcelona kuna biiray Kooxda Paris Saint-Germain heshiis rikoorka adduunka ah sanadkii 2017-kii, laakiin waxaa marar badan la la xiriirinayay inuu ku laabanayo dalka Spain tan iyo markaas.
Fabregas ayaana soo jeediyey inuu haysto xiddigan wax walba oo uu ugu baahan yahay inuu noqdo kan ugu fiican.
“Neymar waa soo saare wax soo saar leh, waxa uu leeyahay tayo la heer ah Ronaldinho, waa xiddig sare oo isbedel sameeya marka uu doonayo, waa waqti ilaa markii aan la ciyaarayay isaga uu dhawaan na dilay labo kulan oo aan la dheelnay PSG,” ayuu Fabregas u sheegay Jariiradda Marca.
“Lionel Messi, Luis Suarez iyo inta soo hartayba waxay jeclaayeen inay kooxda ku haystaan oo ay isku koox ahaadaan, maxaa yeelay daqiiqad kasta wuxuu ku siin karaa caawimaad ama goysmo, waana wax ku adag ciyaar si siman u socota.”
“Wuxuu leeyahay wax walba oo ugu fiican, marka garoonka lagu jiro waa cunug aad u wanaagsan, waa sida ilmo oo kale; mar walbana wuu faraxsan yahay oo nolosha ayuu ku raaxeystaa.”
Neymar ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu dhimo mushaharkiisa 50 boqolkiiba (50%) si uu dib ugu laabto xagaagan, kooxdiisii hore ee Barcelona.